Indalo yoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya | Ezezimali
Ewe imeko yezoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya iyakuthatha isigqibo ukuze kwiinyanga ezizayo sikwazi ukwenza ipotfoliyo enobulungisa nefanelekileyo. Ngenjongo yokwenza iimpazamo ezimbalwa kangangoko kunokwenzeka kunye nokwenza ngcono inzuzo yolondolozo lwethu, leyo, emva kwayo yonke loo nto, imalunga nantoni kwezi zihlandlo. Akwanelanga ukukhetha ezona zokhuseleko zibalaseleyo kwiimarike ze-equity, kodwa ke kukuziqhelanisa neemeko zentengiso yezemali. Ukuze ngale ndlela, imbuyekezo esiyifumanayo ukususela ngoku isebenze ngakumbi kunangoku.
Kule meko ngokubanzi, akukho mathandabuzo ukuba amathuba amatsha eshishini ayavela kwimarike yemasheya ngalo lonke ixesha. Nokuba kwindawo eguqukayo ye-macroeconomic efana nale inokukhula ukusukela ngoku. Ukuba sesinye sezona zizathu zibalulekileyo zokuba yinxalenye elungileyo ye- iintshukumo zabatyali mali abancinci nabaphakathi bayalibala. Ukulindela okunokwenzeka kuqoqosho nakwezinye zeeparameter ezifanelekileyo.
Ukuze uphuhlise naluphi na uhlobo lwesicwangciso sotyalo-mali ngendawo eyahlukeneyo yezoqoqosho kwintengiso yemasheya, siza kukunika ezinye izitshixo ezibaluleke kakhulu Kuya kufuneka ufake isandla ukusukela ngoku. Ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi kwimarike yemasheya ngokhuseleko olukhulu ngakumbi nangaphezulu kwayo yonke into, uzikhusele ekuphazanyisweni ziimalike zezabelo. Ewe ayizukuba nzima ukuyiphumeza kwaye inokukunika uvuyo olukhulu kwiintsuku ezizayo. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
1 Imeko yezoqoqosho: inzala
2 Waqhekeza kuqoqosho
3 Ubushushu ezingxoweni
4 Eminye imingcipheko ihambela phezulu
5 Izinto ezifanelekileyo kwimarike yemasheya
6 Ngaphandle kokulindela lukhulu kwiingxowa
Imeko yezoqoqosho: inzala
Ngaphandle kwamathandabuzo iya kuba yenye yezinto eziya kuthi zibeke ikhosi kwimarike yemasheya kule minyaka izayo. Ukujongana nesigqibo esenziwe ngabaphathi bezemali, ngandlela thile. Nangona baya kuvula impompo kwixabiso lemali okanye ukuba, ngokuchaseneyo, yonke into izakuqhubeka njengoko bekuhleli kunjalo ukuza kuthi ga ngoku. Oko kukuthi, nge Ixabiso eliphantsi lemali kwaye incede kangakanani ii-indices kwizwekazi elidala zikhule ngamandla amakhulu kule minyaka mihlanu idlulileyo. Inxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi bayakusazi esi sigqibo esiza kuchaphazela umdla wakho kubudlelwane bakho nehlabathi lemali.
Ngelixa kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba sijamelene nemeko yezoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya echaphazeleka ukwehla kuqoqosho lwamazwe aphesheya. Kwaye oku azizondaba zimnandi kubatyali mali, kuncinci kakhulu kwiinkampani ezidweliswe kwiimarike zokulingana. Kuba kwimeko yezoqoqosho olukhulu kwintengiso etshintshayo, awuzukukhetha ngaphandle kokutshintsha ipotifoliyo yakho yokuyibeka kunye namaxesha amatsha ekuya kufuneka siphile kuwo ngoku.
Enye into ekuza kufuneka icacisiwe kwezi nyanga zizayo kukuba uqoqosho luza kuhamba kancinci kangakanani. Iya kuxhomekeka kwi- ulwalathiso lwentengiso yezabelo, ngandlel 'ithile. Kwaye kufuneka uzilungiselele ukujongana nale meko intsha inokuvela nanini na. Ngotshintsho kwiqhinga lotyalo-mali ekufuneka uluthathe kwezi veki zimbalwa zizayo. Kwilizwe eliguqukayo njengoko kusenzeka kwimarike yemasheya kwaye oko kunokwenza ukuba ulahlekelwe yimali eninzi okanye ngokuchaseneyo uyiphumelele.
Ngale ndlela, izinto eziqhelekileyo kwizenzo zakho okanye akukho mathandabuzo ukuba kuya kuba yinto eqhelekileyo kunye nokulumkisa ukwenza naluphi na uhlobo lwesicwangciso-mali. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo ukuba le nto ungcakazayo yimali yakho kwaye oku kuya kukwenza ukuba ucinge ngezenzo ekufuneka uzingenise ukusukela ngoku. Ayothusi into yokuba inyani inokubakho utshintsho kumjikelo weshishini nanini na. Kuko konke oku kuguqukayo kuthatha imeko yezoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa ekufuneka uphinde ukuvavanye ngoku.
Ewe kunjalo, le yinxalenye ekufuneka ithathiwe ukuthatha isikhundla kwimarike yemasheya. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo ukuba iimarike zezabelo ziye zakhula kakhulu kwiinyanga nje ezidlulileyo, kunye nezitokhwe ezo zixabise malunga neepesenti ezingama-50. Ngale ndlela, kukho amazwi amaninzi alumkisa ukuba izilungiso zisondele kakhulu kwaye kuzo sinokushiya ii-euro ezininzi apha endleleni. Akufanele silibale malunga nale nto ukuba asifuni ukufumana ezinye izinto ezothusayo kwiinyanga ezizayo. Nangona kuyinyani ukuba ukhuseleko oluninzi lusilele ngasemva kule minyaka idlulileyo, ngakumbi abo bakwicandelo leebhanki.
Kule meko ye-macroeconomic yentengiso yemasheya ayinakulityalwa ukuba enye yezona ndlela zikhuselekileyo kukuhlala ukuhlawulwa ngokupheleleyo. Ukuthintela iimeko ezingathandekiyo kwiimarike ze-equity kwaye ngokungathandabuzekiyo inokwenzeka ngelinye ixesha ukusukela ngoku. Ngale ndlela, kunokubakho imeko enzima kakhulu ekufuneka uyithathele ingqalelo xa ucwangcisa isicwangciso sakho sotyalo-mali. Ngengqiqo ethile okanye enye kwaye oko kuya kufuna enye okanye enye inkqubo yokunyanzelisa izenzo zakho kwimarike yemasheya. Ngothotho olupheleleyo lwezinto eziguqukayo ezinokuvela nangaliphi na ixesha nakwimeko.
Eminye imingcipheko ihambela phezulu
Isebe lokuhlalutya kweBhanki lithetha ngemingcipheko eyahlukeneyo, phakathi kwezi zinto zilandelayo: Urhwebo lweSino-American, IBrexit, umjikelo waseYurophu kunye nedemografi. Apho ithemba leengxoxo zeSino-American liphuculwe. Nangona ngoku sidlula "kwelona xesha limnyama" ngokubhekisele kwiBrexit, iziphumo zayo zokugqibela azizukutshabalalisa (ukwandiswa kwexesha elibekiweyo kunye nokusetyenziswa kwegatya lokhuselo lokurhweba ngeempahla).
Ikwabonisa ukuba umjikelo waseYurophu uye waba lelona lizwe lisemngciphekweni ngaphambili kunye neendawo ezingafunekiyo ezidityanisiweyo zadityaniswa njengezona zoyikiso zibalulekileyo ekuzinziseni ukwanda koqoqosho, ngakumbi eYurophu. Ngale ndlela, azithandeki kubatyali mali bathathe isikhundla kwiimarike zezabelo. Okanye ubuncinci hayi ngokobuninzi obuya kuba kwimeko entle.
Izinto ezifanelekileyo kwimarike yemasheya
Zine iimpikiswano zokucacisa le meko kwiimarike zokulingana ngokwembono yesebe lohlalutyo lweBhanki. Ziyimali, inzala, inzala, kunye ne-inertia yeshishini lehlabathi. Ukuthengiswa kwemali kungeniswe ziibhanki eziphambili kwaye kwavelisa ngokwanda koqoqosho lwehlabathi bayaqhubeka nokunyusa amaxabiso eeasethi anyuke. Nokuba iFed iyayeka ukukhupha amanzi ngenxa yokuba ithathela ingqalelo ukuba ngoSeptemba ubungakanani bephepha layo elisezantsi sele liza kwanela.
Kwaye akubonakali ngathi iza kunyusa amaxabiso kwakhona. Ngokwenyani, akukho bhanki iphambili kwinqanaba eliphakamileyo eya kuphakamisa amaxabiso kwi-2019 (ubuncinci). Inkqubo ye- Izibonelelo zeshishini ziyaqhubeka nokwanda ngesantya esifanelekileyo (i-S & P 500 + 9,7% kwi-2019, umzekelo) kwaye umjikelo wehlabathi ugcina i-inertia yayo ebanzi, nangona ilahlekelwe ngamandla. Olu dibana lunokunyusa kuphela kwiimarike zesitokhwe njengodidi lweeasethi kwaye ngakumbi ukuba sijonga intsilelo yeenzuzo zotyalo-mali ezizezinye: iibhondi ezinezivuno eziphantsi kakhulu okanye ezingezizo, iidipozithi zihlala zixhomekeke kwiindleko kunye nokuthengiswa kwezindlu nomhlaba sele zikumanqanaba aphezulu.
Ngaphandle kokulindela lukhulu kwiingxowa
Ukusuka kwisebe lohlalutyo lweBankinter bakhetha ukukhetha, njengekota yokugqibela: sibeka phambili imarike yesitokhwe yaseMelika emva koko, sithatha umngcipheko omkhulu, iBrazil neIndiya. Sihlala ngaphandle kweYurophu neJapan, ezinokubanakho ukungabinamtsalane. Ayitshintshanga. Bakholelwa ukuba kufanelekile ukubhengezwa, kodwa ngembono yexesha elibanzi. Uqingqo-maxabiso oluhlaziyiweyo luphezulu ngaphezulu kweenyanga ezi-3 ezidlulileyo, ngaphandle kweNikkei 225, ekufumaniseke ukuba umvuzo wayo awuthandeki.
Uqikelelo lwe-Bankinter yoqikelelo lwandisa amaxabiso alo I-EuroStoxx 50, Ibex 35 kunye ne-S & P 500 ngenxa yokuba ngaphezulu kweenyanga ezi-3 zokugqibela isivuno semarike (i-IRR) seminyaka eli-10 seebondmark ze-benchmark sehle ngokulinganayo kunembono yeziphumo zeshishini ezihlaziyiweyo ezantsi. Oko kuphakamisa amaxabiso ngandlela thile, kodwa ngokusekwe kwingxoxo engaphantsi kokukhuthaza: amaxabiso enzala asezantsi, ukuseta ukuba umvuzo olindelekileyo uphinde wahlaziywa ezantsi. Uqikelelo ngamanqaku ayi-9.815 e-Ibex 35, 3.634 ye-EuroStoxx 50 kunye ne-3.249 ye-S & P 500.
Konke oku kumxholo wedola eqinileyo (phakathi kwe-1,13 kunye ne-1,20), i-yen engaphantsi kobuthathaka kunokuba kufanele (124/130) kunye neoyile ebiza kakhulu kunokuba inokuhambelana (iBrent phakathi kwe-65 kunye ne-70 yeedola zaseMelika) kulondolozo olusikiweyo yi-OPEC kwaye inokuyenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Indalo yoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya